Kuwait Airways weputara ụgbọ elu abụọ mbụ ya Airbus A330neos
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Kuwait Airways weputara ụgbọ elu abụọ mbụ ya Airbus A330neos
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • investments • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • News • Tourism • Transportation • Akụkọ dị iche iche
Kuwait Airways,, ụgbọ elu mba nke Kuwait, anatawo nke mbụ ya abụọ Airbus A330neo ugbo elu. Aircraftgbọ elu ndị a bụ nke mbụ n’ime ụgbọ elu A330neos asatọ. Onye na-ebu ụgbọelu na-arụ ọrụ ugbu a n'ụgbọ elu nke Airbus 15 gụnyere asaa A320ceos, atọ A320neos na A330ceos ise.
Ihe omume a na-egosipụtakwa nnyefe A330-800 mbụ nke Airbus. Ọgbọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ bụ ihe kachasị ọhụrụ na akara ngwaahịa Airbus, na-egosipụta atụmatụ ụlọ ọrụ iji nọgide na-enye ndị ahịa ụgbọ elu ya akụnụba na-enweghị atụ, mmụba arụmọrụ arụmọrụ yana nkasi obi ndị njem kachasị elu yana usoro ntanetị ọhụụ egosipụtara. Ekele maka ikike dị n'etiti etiti ya na ntụgharị ya dị oke mma, A330neo bụ ezigbo ụgbọ elu iji rụọ ọrụ dịka akụkụ nke mgbake post-COVID-19.
Onye isi oche nke Kuwait Airways, Captain Ali Mohammad Al-Dukhan kwuru, sị: “Kuwait Airways na-anya isi na mmekọrịta ya na mmekọrịta ya na Airbus na iri afọ anọ gara aga.
Nnyefe nke abụọ mbụ A330neos bụ ihe ọzọ dị ịrịba ama dị mkpa maka Kuwait Airways ka anyị na-aga n'ihu n'ihe mgbaru ọsọ anyị na ntinye nke atụmatụ mmepe ụgbọ mmiri anyị, "Al-Dukhan kwuru. Iwebata nke A330neos na ụgbọ mmiri anyị na-agbasawanye na-ewusi ọnọdụ Kuwait Airways ike dị ka ụgbọ elu ama ama na mpaghara mpaghara na nke ụgbọ elu ụwa. Ka anyị na-enyochagharị ihe ndị njem anyị chọrọ iji nye ọrụ dị oke mma, yana nkasi obi na nchekwa n'oge ụgbọ elu ọ bụla, mbata nke A330neos bidoro ọhụụ ọhụrụ na ọrụ anyị na-enye ndị njem anyị n'ụgbọ, na mgbakwunye na ịrụ ọrụ nke ọma na nke ọma ikuku njem ọrụ na Kuwait Airways ”, gbakwunyere Al-Dukhan.
Kuwait Airways 'A330neo ga-enwe nkasi obi ịnabata ndị njem 235, na-egosipụta akwa akwa 32 zuru oke na klaasị azụmaahịa na oche 203 sara mbara na klaasị akụnụba ka ha na-enye nnukwu ibu nwere ike ịnabata ụgwọ ọrụ ndị njem n'ụba.
“A330neo bụ ụgbọ elu kwesịrị ekwesị maka Kuwait Airways n’oge ndị a siri ike. Ngwaahịa a pụrụ iche bụ nke nwere ebumnuche Kuwait Airways iji gbasaa netwọkụ ya n'ụzọ kachasị dị mma na nke dịgasị iche iche, "Christian Scherer kwuru, Airbus Chief Commercial Officer. “Site na nkasi obi ya kachasị mma nke ọdụ ụgbọ elu ya ga-aghọ ngwa ngwa kachasị amasị ndị njem. N'ihi ọkwa ya dị elu na uru ọnụ ahịa ya, A330neo ga-adị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma na nke ugbu a nke Kuwait Airways ugbua nke A320s, A330s na ụgbọ mmiri ọdịnihu nke A350s ”ka ọ gbakwụnyere.
The A330neo bụ ezi ọgbọ ọhụụ ọhụụ, na-ewu atụmatụ nke A330 a ma ama na teknụzụ leverage maka A350. Kwadoro site na igwe ugbua nke Rolls-Royce Trent 7000, ma gosiputara nku ohuru na ubara na A350 XWB sitere n'ike mmụọ nsọ Sharklets, A330neo na-enye ọkwa na-enwetụbeghị ụdị ya - na 25% obere mmanụ ọkụ na oche ọ bụla karịa ndị asọmpi ọgbọ gara aga. Ejiri ụlọ elu nke Airspace, A330neo na-enye ahụmịhe ndị njem pụrụ iche nwere ohere nke onwe na usoro ọhụụ ọhụụ ọhụụ na njikọta.
Nnukwu ihe gbawara na-ama jijiji na Dubai
UNWTO na-ahazi Summit 1st Global Youth Tourism Summit na ...
Onye nlegharị anya wakporo, gbuo, rie anụ ọhịa bea agụụ na -agụ mgbe ...
Ime ka ihu igwe na enyi na enyi sikwuo ike na efu
JetBlue maliteghachi ụgbọ elu na-enweghị nkwụsị site na San Jose ruo New ...